Xasan Sheekh Maxamuud: “Waxaa jira deegaano uu mamnuuc ka yahay calanka Soomaaliya…” | Somalia News
Xasan Sheekh Maxamuud: “Waxaa jira deegaano uu mamnuuc ka yahay calanka Soomaaliya…”
Muqdisho:– Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay 66 sano guuradii ka soo wareegatay markii ugu horreysay ee Soomaaliya calan yeelato.
Xasan Sheekh ayaa xusay in calanka Soomaaliya mamnuuc ka ahaa in ka badan 85% dhulka Koofurta iyo bartamaha markii loo doortay madaxweynenimada Soomaaliya September 2012, iyada oo calanka Al-Shabaab oo kaliya uu ka taagnaa.
“Ilaaheey fadligiis, dadaalka halyeeyadeena iyo haggaaminteena darteed, waxaan ku guuleysannay in calankeena cirka u eg dib looga taago gobolla badan oo uu ka dul babado,” ayuu ku yiri hadal uu si gaar ah ugu jeediyay bulshada munaasabadda maalinta calanka.
“In ka yar 10% ayaa lagu soo koobay dhulka ay Al-shabaab ka talinayeen markii uu xilka wareejiyay Xasan Sheekh. Waxaa la xoreeyay in ka badan 25 degmo oo ka tirsan dalka”
Previous articleWasiirka Arimaha Dibada Somaliya Oo Kulan La Qaatay Ergayga Qaramada Midoobay Ee Somaliya
Next articleHaddaad Roob tahay Gaalkacyo ma ku di’i leheeyd!!!